I-Ken's Oceanside Cottage, e-Round Pond - I-Airbnb
I-Ken's Oceanside Cottage, e-Round Pond
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Crissy
U-Crissy Ungumbungazi ovelele
I-Quarry Cottage iyikotishi laseMaine elingasogwini lolwandle lakudala elitholakala edolobhaneni elihle laseRound Pond.Kunokubukwa kolwandle kuwo wonke amawindi, kuhlanganise nobhavu! Ikhaya elimiswe ngokunambitheka nangothando litholakala ekugcineni enyakatho ye-cove, impahla iyamangaza.Umnikazi uyakwamukela ukuthi uchithe isikhathi esikhumulweni samanzi esijulile, ulethe isikebhe sakho!Hlola ugu lolwandle oluyimfihlo oluyimfihlo bese uhambahamba uye edolobhaneni. Awukwazanga ukuphupha indlela engcono yokuvakashela e-Maine.
Ikotishi linezitezi ezi-2. Eyokuqala inendawo yokuhlala, ikhishi, indawo yokudlela yasekhishini, kanye nokugeza okuhhafu.Isitezi sesibili yigumbi lokulala elinombhede olingana neNdlovukazi, umabonakude kanye negumbi lokugezela elinobhavu wokugeza.*Sicela uqaphele* igumbi lokulala liyigumbi elilodwa elingenawo ukwahlukana phakathi kwegumbi lokugezela negumbi lokulala okwenza indawo yokulala enomoya futhi evulekile.Ikotishi lithokomele, linemishini yobuciko esezingeni eliphezulu futhi ligcwele imidwebo yabanikazi abanamakhono iningi layo eligqugquzelwe indawo.
I-Round Pond iyidolobhana elikhetheke kakhulu eMuscongus Bay. Yakhiwe ngendawo enkulu yemvelo egcwele izikebhe eziningi ezivela ezikebheni zama-lobster ezisebenzayo kuya emisebenzini yezandla yokuzijabulisa.Itholakala endaweni esenyakatho ye-Round Pond Harbour imibono yendawo iyamangalisa.Kungenzeka ukuthi wenza umsebenzi wechweba ubheke kolunye uhlangothi, bese ubuka amakilasi okuhamba ngomkhumbi nezikebhe zama-lobster ezisebenza e-Loud's Island kwenye noma ubuke phansi itheku.
I-Cottage iwuhambo oluhle oluya edolobhaneni lapho ungajabulela khona iphawundi ye-lobster ye-Muscongus, ithoyizi elithandekayo le-Granite Hall / u-ayisikhilimu / nesitolo sikaswidi, isitolo sekhofi esihle kakhulu kanye nebhikawozi, imakethe encane, isitolo sakudala, indawo yokudlela kanye negalari yobuciko.Ungachitha isikhathi sakho ujabulela ugu lolwandle oluhle, ufunda esikhumulweni semikhumbi futhi udla endaweni ngaphandle kokungena emotweni yakho.Uma ungena emotweni yakho kukhona ukuhamba ngezinyawo okungapheli, i-coastal vista's, namadolobhana amnandi ongawahlola.Sazise izinto ozithakaselayo (i-kayak, inhlanzi, idla, thenga, hamba ngezinyawo) futhi sizokukhomba endleleni efanele.
I-Quarry Cottage iqanjwe ngenkwali ye-granite etholakala ngemuva nje kwesitudiyo sabanikazi, uzobona amabhlogo amakhulu egwadle ake asikwa manje aphumula ogwini.I-Quarry yayisebenza ngasekupheleni kwawo-1800 lapho ingxenye enkulu yegwadle eyayisetshenziselwa ukwakha iNew York kanye neBoston ivela eMaine.Indawo ezungeze inkwali iyatholakala ukuze uyihlole ngendlela, lena akuyona inkwali yokubhukuda kodwa kumnandi kakhulu ukuyihlola futhi ungakwazi ukubhukuda olwandle usuka emadwaleni.
Thina, abaphathi bezakhiwo, sihlala eduze futhi siyajabula ukukusiza nganoma yini oyidingayo kuhlanganise neziphakamiso zokuthi ukwenze kanjani nokuthi ukwenze kanjani.Siyaqonda futhi ukuthi ungase ufune ukuthula nokuthula. Sikushiyela ukhiye futhi uyasazisa uma usidinga futhi nini.Umnikazi unestudiyo phezulu egqumeni futhi idokodo nogu lolwandle kwabelwanwa ngalo nomnikazi nomndeni wakhe. Sicela usishayele noma usithumele i-imeyili lapho kudingeka.
Thina, abaphathi bezakhiwo, sihlala eduze futhi siyajabula ukukusiza nganoma yini oyidingayo kuhlanganise neziphakamiso zokuthi ukwenze kanjani nokuthi ukwenze kanjani.Siyaqonda fu…
UCrissy Ungumbungazi ovelele